U-Oribi: Akukho Khowudi yokuHlaziya ukuKhangela kunye neempendulo ozifunayo ukuze ukhulise ishishini lakho | Martech Zone
Isikhalazo endiqhubekile ndisazisa kakhulu kumzi mveliso wethu yindlela ezibi ngayo i-analytics kwinkampani ephakathi. Uhlalutyo ngokusisiseko yindawo yokulahla idatha, injini yokubuza, kunye neegrafu ezintle phakathi. Uninzi lweenkampani ziyavela kwiskripthi sabo se-analytics kwaye emva koko abanalo nofifi lokuba bajonge ntoni okanye manyathelo mani ekufuneka bethathe ngokusekelwe kwidatha. Inyaniso iyaxelwa:
Uhlalutyo yi Injini yombuzo… Hayi i Injini yokuphendula
Njengomzekelo omncinci, ndancedisa umthengi owayechukunyiswa, iingxelo ezizenzekelayo ezivela kwiarhente esemthethweni yokuba bahlawule amawaka eedola ngenyanga. Xa ndemba nzulu kwiingxelo, ndaphawula ukuba iingxelo azizange zihluzwe kwingingqi yeshishini- apho zazinyanzelekile.
Ke, khawufane ucinge isiqingatha seendwendwe zakho ezifika zize zifunde iwebhusayithi yakho ongasoze wenze ishishini nayo… ukuhlafuna amaxabiso akho kunye nokuzibandakanya… kwaye ikukhuthaze ukuba wenze izigqibo zoyilo kunye neziqulatho ezixabise inkampani kumakhulu amawaka eedola. Nje ukuba sihlunge idatha yabo, phantse yonke i-metric yatshintshwa ngokumangalisayo-isenza ukuba sikwazi ukuphucula kakhulu iinzame zabo zentengiso yedijithali.
Njengoko ucinga ngohambo lweendwendwe, amathemba, kunye nabathengi kwindawo yakho… yintoni le ithuba liyabiza kukungaqondi uhlalutyo kunye nokwenza utshintsho olusebenzayo ngokusekwe kukuziphatha kwamathemba okwenyani okundwendwela?
Ngelixa ndiyi-geek enkulu kwaye ndiyayithanda iGoogle Analytics, ndiyakholelwa ukuba benze into engeyiyo kwicandelo lethu ngokwenza khulula isixhobo. Amashishini amaninzi ahlekisa ngombono wokuhlawulela uhlalutyo… ngaphandle kokuphulukana nezigidi zeedola ngokungabinakho ukukusebenzisa ngokupheleleyo! Ngena eOribi!
Kukho omnye umda woHlaziyo lukaGoogle esingasoloko sithetha ngalo… kwaye loo nto kukuba amaqonga kaGoogle kunye neMithombo yeendaba yeNtlalontle ayidlali kakuhle kunye. Ngapha koko, ngokuchaseneyo, bayala ukudlulisa idatha phakathi komnye nomnye. Ngenxa yoko, ukuzama ukwalatha ifuthe losasazo lwasentlalweni kunye nokubonisa ukuba ukufikelela kuluntu kunye nokunyusa intlalontle kuguquko kunzima kakhulu.
Oribi: Uhlalutyo lweNtengiso impendulo Injini!
UOribi ibonelela ngesisombululo esimangalisayo sokulandela umkhondo ongenamakhowudi, ukuqonda okwenzekayo, iifaneli ezilumkileyo, ulungelelwaniso lomnyhadala, uhambo olunye lwendwendwe, iingxelo zesiko, ukuthengisa okugcweleyo, uhlalutyo lomsebenzi wesitayile, nokunye okuninzi.
kunye UOribi, Abathengisi akufuneki bachithe ixesha lokuhluza kunye nokuhlahlela uhlalutyo, bayakwazi:
Yandisa ukuguqulwa kwabo.
Yakha ii-funnels, umkhondo wokuziphatha kwabahambi, uhlalutye ukuguqulwa, kunye nokunye ngaphandle kokufaka iikhowudi.
Yenza iingxelo ezintle kwimizuzu nje embalwa.
Lungiselela amaphulo abo kuGoogle nakuFacebook.
Ukhenketho lweMveliso yeOribi
Nalu ukhenketho olunemveliso ngakumbi UOribi kwaye konke kufanele ukubonelela abathengisi kunye namashishini anethemba lokufumana ngokupheleleyo iinzame zabo zentengiso yedijithali- ukusuka kwiwebhusayithi yabo ukuya kumajelo entlalontle- ukukhulisa izikhokelo kunye nokuguqula.
Ngokujonga nje, Nazi ezinye zeempawu ezimangalisayo kunye nezibonelelo zika-Oribi:
Imisebenzi - yakha iifaneli ngokulula. Onke amanyathelo kwi-funnel yakho angangowawo nawuphi na umsitho, ucofe iqhosha, undwendwele iphepha, ungenise ifom, okanye umsitho wesiko. Ungazicoca ngeeparameter ezahlukeneyo kwaye wenze ii-funnels ezinqamlezileyo ngokulula.
Ukulungelelaniswa komsitho -Ngaba ukufunda ibhlog yakho kuyonyusa inani lababhalisileyo? Ngaba abatyeleli ababone iphepha lamaxabiso kunokwenzeka ngakumbi ukuba baguquke? Ukudibana komsitho kunceda ufumane iimpendulo.
IiNdwendwe zeeNdwendwe Eli candelo sisalathiso sabatyeleli bakho; yisebenzise ukukhangela iihambo ezinomdla kunye neepateni ezithile. Ukucwangciswa okungagqibekanga kukubonwa ngokuGqibela- iindwendwe ezingaphezulu kolu luhlu ngabo bakwindawo yakho ngoku okanye abatyeleli bakutshanje.
eCommerce -Ukuba uthengisa ngokuthe ngqo kwi-Intanethi, u-Oribi unikezela ngengxelo emnandi ethe ngqo kwiifanele zakho zokuthenga kunye nokunyuselwa.
Iiplagi zeWordPress kunye neWooCommerce -U-Oribi uphuhlise zombini iplagi elula yeWordPress kunye neWooCommerce ukufaka iscript sakho ngaphandle kokuhlela itemplate.
Ukudityaniswa kwe-imeyile yoTyelelo -Jika undwendwe olungaziwayo lube lundwendwe olwaziwayo ukuba uqokelela idilesi ye-imeyile ngokusebenzisa iifom zakho zephepha lokufika okanye iifom zobhaliso. U-Oribi unenqaku lokuseta i-imeyile yomtyeleli ngokukhawuleza ukuba bangenise ukuze ubachonge ngokulula.
Nokuba ujonge kwishishini ukuqhuba ngakumbi kukhokelela kwiwebhusayithi yakho, iarhente yentengiso ejonge ukunika ingxelo engcono kunye nokusebenza kwabaxumi bakho, okanye indawo ye-ecommerce ejonge ukwandisa amazinga okuguqula- UOribi Unayo yonke ifayile ye- iimpendulo udinga.
Bhalisela iAkhawunti yasimahla yeOribi!
Ukubhengezwa: Ndililungu le UOribi kwaye ungasebenzisa ikhowudi yesaphulelo mzantshi eyongezelelweyo ye-5% isaphulelo ukuba uthatha isigqibo sokuthenga umrhumo (kucetyiswa kakhulu)!
tags: Ukuqonda okunokwenzekaUhlalutyoUhlalutyo lokusebenza kwejeloukulandelwa komsitho ongenamakhowudiUhlalutyo lwefaneliIifanele zokuguqulaUmjelo wejelo lomnqamlezoiingxelo zesikoUhlalutyo lwe-ecommerceUnxibelelwano lomsithointengiso epheleleyoi-google analyticsoribiuhambo olunye lweendwendweiifanele ze-smartUhlalutyo lweoocommerceUhlalutyo lwegama